Fumana uncumo olugqibeleleyo ngeAdobe Photoshop | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Fumana uncumo olugqibeleleyo ngeAdobe Photoshop
Cfumana uncumo olugqibeleleyo nge Iifoto zeAdobep yinto esinokuyenza ngokukhawuleza kwaye kulula ukuyibona amazinyo amhlophe kakhulu ngathi sisandula ukuphuma kugqirha wamazinyo. Yindlela elungileyo yokulungisa uncumo lwethu kwiifoto okanye ukuphucula ukuncuma kwabanye kuzo zonke iiseshoni zokufota esizenzayo.
Mhlophe amazinyo nge Photoshop Iya kusivumela ukuba sifunde a esisiseko ubuchule bokuphinda ubambe ifoto Ngale nkqubo, emva kwexesha unokulungisa ezinye izinto zeefoto ezinje ngombala wolusu, ezimhlophe zamehlo okanye iimpahla. Inkqubo ihlala ifana Kufuneka siyisebenzise ngeendlela ezahlukeneyo, sikhangele apho inokuba luncedo kuthi.
Into yokuqala ekufuneka siyenzile yile retouch kukuba nayo ifoto yoncumo Apho ungabona khona amazinyo, eyona nto ilungileyo yile yenza ifuthe emazinyweni ngokuqaqamba okuncinci ukubona ngcono isiphumo kodwa kwimeko yokungabinamfanekiso ukuze sikwazi ukusebenzisa nantoni na esinayo.
Kule nto isikhundla sifunda ukusebenzisa oku kulandelayo herramientas:
Sivula umfanekiso wethu kwi Photoshop y siphinda-phinda umaleko ophambili.
Nje ukuba sibe nomfanekiso wethu, into elandelayo ekufuneka siyenzile yile yenza ukhetho lwezinyo, Ngale nto sinokusebenzisa nasiphi na isixhobo sokhetho, kule meko siza kusebenzisa imaski ekhawulezayo.
Cofa ukhetho olukhawulezayo lwemaski kwaye senza ukhetho lwamazinyo ngokungathi ibrashi eqhelekileyo. Esi sixhobo siyasivumela indawo yepeyinti emva koko wenze ukhetho, kule meko siza kwenza ukhetho kunye ibrashi ngobulukhuni obuncinci ukunqanda ukwenza ukuba isiphumo siqapheleke kakhulu kwimiphetho yokhetho.
Kancinci kancinci siyayenza Ukukhetha izinyo ngesigqumathelo esikhawulezayo Ukuqinisekisa ukuba ukhetha zonke ngaphandle kokusishiya nayiphi na indawo. Emva kokwenza ukhetho, into elandelayo ekufuneka siyenzile cinezela i-icon ye-mask ekhawulezayo kwakhonaNgokwenza oku siza kudala ukhetho lwayo yonke into engaphandle kokhetho lwethu. Ukuphela siguqula ukhetho ekukhetheni imali.
Emva kokwenza ukhetho siza kwenza ifayile ye- uhlengahlengiso lwamaqondo omaleko Ukuze mhlophe amazinyo ethu, olu luhlu lolungelelwaniso luyasivumela yandisa abamhlophe nabamnyama ngohlobo lokuba ukuqaqamba okungaphezulu kufezekiswe ngoncumo, yindawo yokubamba enokusetyenziswa kwizinto ezininzi zomfanekiso.
Kwimizuzu nje embalwa siphumelele nika ubomi boncumo lwethu ngoncedo lwe Photoshop usebenzisa izixhobo ezinokusinceda kwiifoto ezininzi ezenziwa ngokutsha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » Fumana uncumo olugqibeleleyo ngeAdobe Photoshop
Isithunzi sobuso obunesiqingatha.